यस्तो छ नेकपाका बहुमत सांसदको बैठकलाई प्रचण्डले गरेको सम्बोधन (पूर्णपाठ) - Everest Dainik - News from Nepal
यस्तो छ नेकपाका बहुमत सांसदको बैठकलाई प्रचण्डले गरेको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
२०७७, ६ पुष सोमबार
एउटा उदाहरण मात्रै भनौं- यो पार्टी एकता फुटाउनका लागि हाम्रो अर्को अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले गत केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पटक-पटक प्रयास गर्नुभयो । कहिले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, कहिले कथित एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न लगाएर फुटाउने, कहिले अरु सबैलाई अपमान गरेर फुटाउन खोज्ने गर्नुभाथ्यो । हामीले पटक-पटक बचाउने गर्दथ्यौं ।
याे पनि पढ्नुस वामदेवको सचिवालयले भन्यो– सूर्य थापा दलाली र घटिया हो, तह लगाइयोस् !
यो दुर्घटना, यो त बडा भयानक चिज हुने भयो, हामी छलफल गरिराख्या छौं, अन्तरक्रिया गरिराख्या छौं, समय लिइराख्या छौं, समय धकेलिराख्या छौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेँ साढेँ ८ बजेतिर हो सायद । र, मैले यस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेँ, यदि तपाईं केही सोच्दै हुनुहुन्छ भने कम्तिमा अन्तिममा तपाईं र म अलि गम्भीर ढङ्गले छलफल नगरेसम्म तपाईं निर्णय नलिनुहोला । तपाईं भन्नुहोस्, दुईटा अध्यक्ष एकचोटि राम्रोसँग छलफल गरेर मात्रै केही गर्न पर्‍यो भने गर्नुहोला भन्दा ‘हुन्छ’ भन्नुभयो ।
याे पनि पढ्नुस झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘कि प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो, होइन भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’
माननीय सदस्यहरु, हामी मरेका छैनौं
सबै माननीय सदस्यहरुको ध्यान तान्न चाहेको छु- हामी हाम्रो अधिकारको अपहरण गरियो भनिएको छ । संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ । हामीलाई मारियो भनिएको छ, हामी मरेका छैनौं, हामी जीवित छौं । यो कुरा बुझ्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । हामी जीवित छौं । संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको कुरा गरेर हामी यत्रो माननीय सदस्यको सार्वभौम संसदलाई मार्‍यौं भनिएको छ । तपाईं हामी मर्‍यौं कि ज्युँदै छौं भन्ने प्रश्न भएको छ आज । तपाईं हामीले कता-कता हामी परम्परा कता कता देखेको, पहिला कांग्रेसको, त्यसपछि बामपन्थीहरुको पनि देखियो, त्यो अनुभवमा भएर हो कि भएर हामी मर्‍यौं क्यारे भन्याजस्तो अनुहार बनाएको जस्तो पनि महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ । हामी मरेका छैनौं । हामी जीवित छौं । संविधानतः हामी जीवित छौं । लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार हामी जीवित छौं । अब हामी जीवित छौं भनेर जुलुस लगाएर हिँड्नपर्ने भयो । हामी मरेका छैनौं ।
त्यसकारण माननीय सदस्यहरु, तपाईं हामीले पहिला बुझ्न पर्‍यो, हामी जीवित छौं भनेर । यो जीवित छौं भन्ने कुरा भन्न चाहे सर्वोच्च अदालतमा जान पर्‍यो, हामी जीवित छौं । हामीलाई मर्‍यो भनेको गलत हो । मर्दै नमरेकालाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर हामीलाई मर्‍यो भने । सर्वोच्च अदालतलाई भन्न पर्‍यो, हामी ज्युँदै छौं ।
हामी हाम्रा ११५ जना संघीय सांसदहरु, जसले हस्ताक्षर गरिसकेका छौं हामी ज्युँदै छौं भन्नेवाला पर्‍यौं । एकथरी केही केही साथीहरु हामी मर्‍यौं भनेर उता बसिराख्नुभा’छ । ती मर्‍यौं भनेकालाई भन्नपर्‍यो- साथीहरु, तपाईं ज्युँदै हुनुहुन्छ, कहाँ, कसरी मरेको ठान्नुभयो ? तपाईंहरु ज्युँदै हुनुहुन्छ, हामी ज्युँदातिर आउनुस् भन्नपर्‍यो । कहाँ मर्‍यो भन्नुभएको ? दुई वर्षभन्दा बढी त हाम्रो कार्यकाल छँदैछ, यसलाई प्रतिकात्मक बुझ्नुहोला ।
प्रधानमन्त्रीले ती साथीहरुलाई तिमीहरु मर्‍यौ भन्नुभएछ, राष्ट्रपतिले मर्‍यौ भन्नुभा’छ । तर, हामी मरेकै छैनौं । हामी मरेका छैनौं भन्ने प्रम्ााण प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालततिर हामी सबै मिलेर जान पर्‍यो । सबै सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत गयो भने त सर्वोच्च अदालतले त मरेका रहेनछन् भन्ने देखिहाल्छ । देखिसकेपछि मर्‍यो भन्न त मिल्दैन नि त ।
याे पनि पढ्नुस ‘भारतीय सीमामा काँडेतार र पर्खाल लगाऔं, तत्काल नयाँ नक्सा प्रकाशन गरौं’
अरु दल नेपाली कांग्रेस, जसपालगायतका दलहरुलाई पनि सबै मिलेर हामी मरेका छैनौं भनेर, जुलुस लगाएर, झण्डै दुईसय जनाको जुलुस हामी ज्युँदै छौं भनेर सर्वोच्च अदालत गयो भने हामीलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले नमरेको देखिसकेपछि त मरेको भन्ने त हुँदैन । त्यसकारण, भित्र मनोबल बनाउनपर्‍यो । हामी ज्युँदै रहेछौं भन्ने पहिला थाहा हुनपर्‍यो ।
पहिला-पहिला यस्तो हुँदैनथ्यो, गिरिजाबाबुका पालामा । या कमरेड मनमोहन अधिकारका पालामा । त्योबेला हामी जुलुस लाएर सर्वोच्चमा जान मिल्दैनथ्यो । तर, योपटक मिल्छ । हामी जान्छौं, जानपर्छ । सर्वदलीय बैठकमा पनि हामी योबारेमा छलफल गछौर्ंं । तर, कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु- पहिला तपाईं हाम्रो मनभित्र हामी बाँचेकै छौं भन्ने कुराको बोध हुनपर्‍यो । पहिला ज्ञान भएपछि जोश आउँछ । मरियो कि क्या हो, मारे कि क्या हो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर हामी २७५ जनालाई ड्याम्म हाने भने जस्तो गर्‍यो भने त मनोबल गिर्छ ।